Daruuraha layaabka leh ee Subaxnimada Subaxnimo iyo sababaha suurta galka ah | Saadaasha Shabakadda
Muuqaalka Cirka ee Daruuraha Sharafta Badan ee Subaxdii
Daruuraha Subaxnimo ee Subaxnimada, Isbaanishka, daruuraha ammaanta subaxnimo ama daruuraha gurguurta, waa mid ka mid ah daruuraha aadka u yar ee jira. Badanaa waxaa laga helaa inta u dhexeysa Papua New Guinea iyo Australia, oo ku taal Gacanka Carpentaria, badda Arafura. Waxay muuqdaan inta udhaxeysa bilaha Sebtember iyo Oktoobar, iyo markay umuuqato in wax walboo horeyba loo ogaaday loona sharaxay, daruurahaani waa sharciga xaqiijinaya ka-reebitaanka. Abuuritaankiisu waa mid aan la hubin.
Marar aad u yar ayaa lagu arkay Mexico, Boqortooyada Ingiriiska, Kanada ama Baraasiil. Khubaradu waxay isku dayeen inay darsaan asalka iyo sababaha loo aasaasay, iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin abuuritaankiisa.. Intaas waxaa sii dheer, dhaqankoodu waa ka fog yahay daruuraha ugu caansan ee aan u baran jirnay inaan aragno. Qarsoodiga ku wareegsan iyaga ayaa sii kordhaya.
Daruuraha ammaanta Subaxdii sidee bay u eg yihiin?
Waxay qiyaasi karaan dherer ahaan ilaa 1.000 kilomitir, qiyaastii bilowgii Jasiiradda Iberia. Cabirkiisu wuxuu u dhexeeyaa 1 ilaa 2 kiilomitir sare. Intaas waxaa sii dheer, waxaa badanaa la socda dabaylo xoog leh, dabeylo iyo xiiro hoose. Qeybteeda hore waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xawli ku socda xirmooyinka hawada ee barokacayaasha ah, tani waa waxa ka caawiya iyaga inay yeeshaan duubkan iyo qaabka wareegsan. Rabitaanka sare awgood, barokaciisu wuxuu gaarayaa 60km / saacaddii! Oo ay la socdaan dabaysha ka dhigaysa inay rogrogto, sida aan ka arki karno fiidiyaha, daawashada waxay soo saartaa xitaa dareen naxdin leh.
In kasta oo ifafaalaha aan si buuxda loo caddeyn, haddana sababaha qaarkood ayaa loo aaneeyaa. Gabagabada qaar la gaadhay, iyadoo aan loo eegin kakanaanta ka dambeysa, waa taas badankoodna waxaa sameeya wareegga mesoscale ee laxiriira neecawda badda ka jira aagagga. Nidaamyada hore iyo cadaadiska sare ee loo baahan yahay waxay umuuqdaan inay doorbidayaan sameysankooda. Dabcan, marka qoyaanku sarreeyo, oo muhiim u ah daruur kasta iyo, waxaas oo dhan ka sare, markii ay dabayshu si xoog leh u garaacday maalin ka hor. Noqo sida ay dhici karto, xaalad kastoo jirta, aragti weyn oo la arko.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuraha layaabka leh ee Subaxnimada Subaxnimo iyo sababaha suurtagalka ah